भोलि मंसिर २ गते बिहिबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / भोलि मंसिर २ गते बिहिबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
भोलि मंसिर २ गते बिहिबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
admin 1 week ago जीवनशैली Leaveacomment 236 Views
सामाजिक रूपले प्रसिद्दि र कीर्ति वृद्धि हुनुको साथसाथै व्यपारमा लाभ मिल्नेछ। विवाह गर्न उत्सुक व्यक्तिको सफलतापूर्वक विवाहको आयोजन हुनेछ। तर मध्यान्नपछि तपाईको स्वास्थ्य बिग्रिन सक्ला। लगानी गर्नु अघि सोचविचार गर्नुहोला।
दिन शुभफलदायी रहनेछ। व्यवसायमा स्थिति अनुकूल रहनेछ तथा तपाईको कार्यको उचित प्रशंसा हुनेछ। सामाजिक रूपले मान-प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ। कार्य सरलतापूर्ण सम्पन्न हुनेछ र कार्य लाभ पनि हुनेछ। दाम्पत्यजीवन आनन्दमय रहनेछ। नयाँ कार्य आअरम्भ गर्नको लागि शुभ समय रहेको छ।
प्रतिस्पर्धी र उच्च अधिकारीसँग वाद-विवाद नहोस् यस कुराको ध्यान राख्नुहोला। अधिक खर्च हुनेछ। व्यवसायिक क्षेत्रमा वातावरण सरल रहनेछ। मानसिक रुपले तपाई स्वस्थ रहनुको साथसाथै मध्यान्न्नपछि शारीरिक र मानसिक स्थितिमा अनुकूल परिवर्तन आउनेछ। तपाईको कार्यबाट उच्च अधिकारी पनि सन्तुष्ट हुनेछ।
अनैतिक कार्य र निषेधात्मक विचारबाट टाढा रहनुहोला। परिवारमा झगडा हुनाले शारीरिक र मानसिक अस्वस्थताले सताउनेछ। मध्यान्नपछि विदेशबाट समाचार प्राप्त गर्नुहुनेछ। सन्तानको विषयमा चिन्ता रहनेछ। उच्च अधिकारीको व्यवहारले तपाईको मन दुःख हुनेछ।
मनोरन्जनको साधना धेरै उपलब्ध हुनेछ। मित्र र आफन्तसँग आनन्द लुट्नुहुनेछ। मध्यान्नपछि धेरै सोचेको कारण मानसिक रुपले थाक्नु हुनेछ। क्रोधको अधिकतामा बोलीमा ध्यान दिनुहोला। पैसाको कमी हुनेछ।
दिन तपाईको लागि शुभ रहेको छ। कार्य-सफलता मिल्नुको साथसाथै तपाई आनन्दित रहनुहुनेछ। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहनेछ। शारीरिक र मानसिक रुपले तपाई प्रफुल्लित र स्वस्थ अनुभव गर्नुहुनेछ। भावनाको प्रवाहमा अधिक नबहनुहोला। मध्यान्नपछि तपाईको दिन मनोरंजनमा बित्नेछ।
लेखनकार्य र सिर्जनात्मक प्रवृत्तिको लागि दिन शुभ रहेको छ। बौद्धिक चर्चामा लाभ लिनको लागी सोच्नुहुनेछ। बौद्धिक चर्चामा भाग लिनको लागी कार्यमा सफलता मिल्नेछ। प्रसिद्दि र किर्ति हुनेछ। केहि अधिक भावनाशिल रहनुहुनेछ। व्यवसायिक स्थलमा वातावरण अनुकुल हुनेछ । परिवारमा आनन्दको वातावरण मिल्नेछ।
भावुकतामा ध्यान राख्दा मानसिक व्यग्रता अनुभव कम हुनेछ। वित्तीय मामलाको आयोजन हुनेछ। व्स्त्राभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधनमा खर्च हुनेछ। आमाबाट लाभ मिल्नेछ। मध्यान्नपछि तपाईको विचारमा शिघ्र परिवर्तन हुनेछ। नयाँ कामको सुरुवात नगर्नुहोला। बौद्धिक एवं तार्किक कार्य गर्नुहोला।
दिनको समयमा मन प्रफुल्लित रहनाले मानसिक रूपले एकदम हल्का महसुस गर्नुहुनेछ। परिवारसँग पारिवारिक प्रश्नको चर्चाको आयोजन हुनेछ। मित्रसँग घनिष्ठता बढ्नेछ। भाग्यवृद्धि हुने योग रहेको छ। मध्यान्नपछि केहि अधिक संवेदनशीलता अनुभव गर्नुहुनेछ। मानसिकरुपले निराशा अनुभव गर्नुहुनेछ। विद्याप्राप्तिको लागी विद्यार्थीको समय राम्रो रहेको छ।
धार्मिक विचारको साथसाथै धार्मिक कार्यमा खर्च हुनेछ। अधिक वाद-विवादको कारण पारिवारिक वातावरण कलुषित नहोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला। परिवारको तपाईसँग मनदुःख र असन्तोष रहनेछ। मध्यान्नपछि मन रहनेछ। मित्र-आफन्तसँगको भेट आनन्दमयी रहनेछ।
तपाईको मन प्रफुल्लित हुनेछ। गहन चिन्तन शक्ति र आध्यात्मिकता दुवैमा मन डुबीरहनेछ। नकारात्मक विचारबाट मन निकाल्नुहुनेछ। बोलीमा ध्यान राख्नुहोला। निर्णयशक्तिको अभाव रहनेछ। विद्यार्थीको विद्याप्राप्तिमा विध्न आउन सक्ला।
धन सम्बन्धित व्यवहार नगर्नुहोला। मन एकाग्र गर्ने प्रयास नगर्नुहोला। खर्चमा ध्यान राख्नुहोला। आफन्तसँग मन:दुख हुनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। मध्यान्नपछि तपाईको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। मानसिक रूपले स्वस्थताको अनुभव गर्नुहुनेछ। मित्रबाट उपहार मिल्नेछ।
Previous आठ दिदी–बहिनी र ‘डिभोर्सी’ आमा, पिता बिना यसरी बित्यो कट्रिना कैफको बाल्यकाल
Next जात्राको लागि २ दिन सार्वजनिक बिदा